MAQAAL: Zidane Waxa Uu Sumcadiisii Saddexda Champions League Ku Dhaawacay Go'aanka Uu Xilli Ciyaareedka Oo Socda Ku Aqbalay Soo Laabasho, Maxaa La Gudboon Haatan? - Gool24.Net
May 19, 2019 Apdihakem Omer Adem
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinadine Zidane ayaa ugu dambayn kooxdiisa qaab musiibo ah kula soo dhammaystay xilli ciyaareedkii marka horeba fashilka ahaa ee ay soo qaateen.
Madrid oo joogta Estadio Santiago Bernabeu ayaa guuldarro 0-2 ah ka heshay kooxda Real Betis waxaana ay qaab foolxumo ah kusoo xidheen horyaalka.
Kulankaas ay la yeesheen Betis ayaa ah mid tababaraha ree France lagula bar-bardhigay tababarayaashii ka horreeyay xilli ciyaareedkan ee Julen Lopetegui iyo Santiago Solari.
Aan ku bilawnee tababare Lopetegui oo xilli ciyaareedkan la bilawday Los Blancos ayaa soo maamulay 10 kulan oo horyaalka ah isaga oo kaliya soo guuleystay afar jeer halka uu afar kale guuldarrooyin lasoo kulmay laba kulana bar-bardhac galay.
Dhinaca kale tababarihii bedelay Lopetegui ee Solari ayaa isagu lagu tilmaami karaa midka loogu qaatay waxaana uu 17 kulan oo horyaalka ah soo hoggaamiyay Real isaga oo 12 soo guuleystay hal mar bar-bardhac soo galay afar jeerna laga soo adkaaday.
Haddii aan u nimaado Zidane ayaa 11 kulan soo hoggaamiyay kooxda horyaalka isaga oo shan kulan guulo u keenay, afar fashilmay isla markaana laba jeer bareejo lagu qabtay.
Zidane ayaa lagu sifayn karaa mid aan waxba ku dhaamin shaqsiyaadkii ka horreeyay walow dhinaca kale loogu garaabi karo inuu yimid xilli ay ciyaartoyda kooxdu niyad jabeen oo ay dhammaan ka hadheen tartamadii ay ku jireen.
Waxa ugu fiican ee uu haatan samayn karo Zidane ayaa ah inuu isla berri ka bilaabo ka fikirka kooxdiisa iyo sidii uu markale usoo qurxin lahaa xilli ciyaareedka dambe isaga oo dhigaya qorshaha ay ugu horreyn ku helayaan saxeexyada ay doonayaan.
Inuu markale dib usoo xoojiyo kooxda oo uu ka dhigo mid u dagaalanta qaabkii uu saddexda Champions League ugu hoggaamiyay ayaa noqon doonta wax aan sahlayn iyadoo shaqada ugu badan uu ka mari doono sidii uu ku heli lahaa gool dhaliye Cristiano Ronaldo oo kale ah.
Rekoodhada madaw ee kulankan looga diiwaan galiyay kooxda ayaa ah inay xilli ciyaareedka dhan 63 gool soo dhalisay waana midkoodii ugu liitay qarnigan 21-aad taas oo muujinaysa sida ay ugu jabeen bixitaankii Ronaldo.
Haddaba, Adiga ma kula tahay in Zidane uu awoodi doono inuu markale dhoola-caddeyntii kusoo celiyo Bernabeu mise waxa uu markan nusqaamin doonaa sumcadii uu mudada kooban kusoo samaystay?
Ina Xaawo Aaden says:
Waxy ila thy waa kusoo noqonysaa real guulahedii
Real tii 3koob inu dib usoo celiyo meesha kama muuqato zidan waxa kala cadaanaysa inu tababare khibradle yahay iyo inu nasiibkuuna caawinayay waxana muuqata inaanay meesha khibradi ool kulan qudha awood tababare muu muujin intu meeshan ku soo laabtay